News Collection: समाचारकै बिचमा अश्लिल भिडियो !
समाचारकै बिचमा अश्लिल भिडियो !
देश बिदेशका महत्वपूर्ण समाचार देखाउने बेला टीभीमा अश्लिल चलचित्र प्रसारण भयो भने के होला ? स्वीडेनमा हालै एक टीभी च्यानलमा त्यस्तै भयो ।
टीवी ४ च्यानलमा समाचार प्रशारण भइरहेको समयमा समाचार बाचिकाको पछाडीको एउटा स्क्रीनमा भने पोर्न भिडियो प्रशारण भइरहेको थियो । ग्लोबल पोष्टका अनुसार २४ घण्टे उक्त च्यानलको विहान १० बजेको बुलेटिन प्रशारण भइसकेको समयमा यस्तो घटना भएको हो । त्यहाँ दश मिनेटसम्म अश्लिल चलचित्र प्रसारण भएको थियो ।
जतिबेला सिरियाको संकटबारे सम्वाददातासँग कुरकाकानी भइरहेको थियो, उद्घोषकको पछाडी रहेको एक स्क्रीनमा भने पोर्न फिल्म चलिरहेको थियो ।
टीवी ४ ले यसलाई प्राविधिक त्रुटी भनेको छ । टीवी ४ मुल कम्पनी सी मोर इन्टरटेन्टमेन्टका थुप्रै च्यानलहरु छन्, जसमध्ये केहीले रातमा बयस्क फिल्म देखाउँछन् । त्रुटीवस त्यस्तो च्यानलको केवल (तार) कन्ट्रोल रुमको स्क्रीनमा जोडिन पुगेको टीभीले दावी गरेको छ ।